Jehovah Adasefo Yi Hɔn Wiadze Nyina Edwumayɛbea Tsir No Kɔ Bea A Ɔmmbɛn Kurow Mu Wɔ NY
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chol Croatian Czech Danish Dutch Efik English (Borɔfo) Estonian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hindi Hungarian Iban Igbo Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Konkani (Roman) Korean Lithuanian Malagasy Malay Mfantse Nahuatl (Central) Norwegian Nzema Ossetian Polish Portuguese Rarotongan Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tigrinya Totonac Tsonga Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Valencian Xhosa Yoruba (Alata) Zulu
Wɔ July 2009 mu no, Jehovah Adasefo tɔɔ asaase bi ɔmmbɛn kurow mu wɔ New York, a adwen no nye dɛ wobeyi hɔn wiadze nyina edwumayɛbea tsir no akɔ hɔ. Asaase yi kɛse yɛ acre 253 (hectare 102). Ɔda beebi a nna edwumayɛbea tsir yi wɔ wɔ Brooklyn, New York fi afe 1909 no, n’anee-etsifi afamu. Na kwan a ɔda ntamu no yɛ bɛyɛ kilomita 80 (akwansin 50).
Adasefo bɛyɛ 800 na wɔbɛtsena hɔ na wɔaayɛ edwuma wɔ hɔ. Dza wobesisi no bi nye ɔfese adan ahorow, edwumadzi adan ahorow, nye adan akɛse anan a wɔtsena mu. Afei so, wɔayɛ nhyehyɛɛ dɛ wobesi tsetse ndzɛmba korabea a ɔbɛda ndɛber yi Jehovah Adasefo hɔn abakɔsɛm edzi.
Wobesisi adan no wɔ asaase no ne fã acre 45 (hectare 18) do, na woeegya n’afã a wɔaka a ɔyɛ kwaa nye nsu no ato hɔ dɛmara. Wɔrennyɛ mpɔnkɔfuw kɛse biara wɔ asaase no do. Mbom no, ndua a ɔwɔ hɔ no bɛgye asaase no ne fã kɛsenara.
Hɔn a wɔdorɔɔw adan no ne nsusudo no, esiesie adan no dɛ ɔrennsɛɛ enyinam ahoɔdzen anaa ahoɔdzen fofor biara, nye ahodze kɛse. Iyi remma yɛmmbɔ kaw pii wɔ ho, na yɛrennsɛɛ asaase no so. Dɛ nhwɛdo no, wobodua mpɔnkɔfuw a ɔyɛ dzen na onnhia nsiesie pii wɔ adan no sor, na iyi remma nsu a ɔtɔ gu adan no sor no nnsen nnkɔ pii, na amma adan no mu annyɛ hyew. Ɔfese adan ahorow no benya ne kan efi ewia no mu. Nsu a wɔrennsɛɛ no so yɛ ehiadze tsitsir.
Ebɛnadze na okenyaan dɛm ntui yi? Ndaansa yi, Jehovah Adasefo edwumayɛbea nkorbata ahorow a ɔwɔ wiadze n’afã ahorow bi no boa ma wotsintsim Bible nye Bible ho nwoma ahorow a nna nkyɛ wɔyɛ wɔ Brooklyn nkotsẽe no. Afe 2004 mu no, woyii nwoma tsintsim nye ne mmonae a ɔwɔ United States no kɔr Wallkill, New York, a ɔda Brooklyn n’anee-etsifi afamu no. Kwan a ɔda Wallkill nye Brooklyn ntamu no yɛ kilomita 145 (akwansin 90).
Wosusũu kaw a wɔbɔ so ho. Wɔ Brooklyn no, adan ahorow no ho kaw nye no ho esiesie no wɔ sor. Ntsi sɛ wotu kɔ bea a adan no bobɔ ho a, Adasefo no botum dze ntoboa ahorow no edzi dwuma yie dze aboa hɔn Bible nkyerɛkyerɛ edwuma no.
Ɔsɛ dɛ wɔyɛ asaase no do nhwehwɛmu ansaana yeenya mpendo. Sɛ biribiara kɔ yie dze a, adansi no bɛhyɛ ase wɔ afe 2013 mu, na wɔdze mfe anan ewie.
Sɛ edze Jehovah Adasefo hɔn tsintsim bea a ɔwɔ Wallkill, New York, no to nkyɛn a, wɔsan so wɔ nwomasũa anaa ntsetsee bea wɔ Patterson, New York. Ahyehyɛdze no dze edwumayɛbea nkorbata pii dzi dwuma wɔ aman pii do. Adasefo a wɔwɔ wiadze nyina no dodow bor ɔpepem esuon na fã.
Warwick Mfonyin 3 (January Kesi April 2015)
Warwick Ho Amandzɛɛbɔ #1
Warwick Ho Amandzɛɛbɔ #2